ठेकेदारको लापरबाहीले स्वास्थ्य संस्थाका भवन अलपत्र, बिरामीलाई सास्ती । – Vision Khabar
ठेकेदारको लापरबाहीले स्वास्थ्य संस्थाका भवन अलपत्र, बिरामीलाई सास्ती ।
। २१ पुष २०७४, शुक्रबार १४:०३ मा प्रकाशित
खलंगास्थित जिल्ला अस्पताल परिसरमा अलपत्र अवस्थामा रहेको निर्माणाधिन प्रसुती गृह ।
जाजरकोट । जिल्ला सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पताल परिसरमा चार बर्षअघि नै बनी सक्नुपर्ने प्रसुतिगृह अझै बन्न सकेको छैन । भवन निर्माणको कार्य हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतबाट आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा ठेक्का भई भवन निर्माणको जिम्मा फ्राइण्डस कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि कोठेश्वर (३५) काठमाडौंले लिएको थियो ।
२०६८ चैत्र २६ मा सम्झौता भई २०७० मंसिर २९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । निर्माण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीका कारण भवन निर्माणको काम ६ बर्षदेखि अलपत्र परेको हो । भवनको डीपीसी मात्र गरेर निर्माण व्यवसायीले काम छोडेर सम्पर्क्विहिन भएपछि यो भवन लामो समयदेखि अलपत्र परेको हो । जग हालिएको भवनमा अहिले सिसौंका विरुवा उम्रीएर ठुला रुख बनेका छन् । एक करोड १६ लाख ८५ हजार लागतको प्रसुति भवन निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीले घटिघटाउमा ७४ लाख ६६ हजारमा लिएका थिए ।
बढी लागतको काम घटाघटमा लिदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठेक्का स्वीकृत गराएको कम्पनीले पेटी (अन्य) ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिने र आफूले काम नगर्दा पनि भवन निर्माण अलपत्र परेको हो । अत्याधुनिक प्रसुतीकक्ष बनाएर विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको लक्ष्य भवन निर्माण नहुँदा अधुरै रहेको छ । प्रसुती गृह पुरानो भवनमा जेनतेन संचालन भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । यसको मारमा जिल्लाबासी परेका छन् ।
त्यस्तै जिल्लाको कुशे गाँउपालिका ६ स्थित घरंगा स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि ६ बर्षदेखी अलपत्र छ । लोहनी एण्ड ब्रोदर्स तथा एमटी कन्ट्रक्सनले २०५८ सालमै भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तर स्वास्थ्यचौकी भवनको डीपीसी गरेर निर्माण कम्पनीले काम छोडिदिएपछि सो भवन पनि अलपत्र अवस्थामा छ । समयमा आफ्नै भवन निर्माण नहुँदा स्वास्थ्यचौकी लामो समयदेखि भाडाको घरबाट संचालन भइरहेको छ । भाडाको घर व्यवस्थित नहुँदाउ पचार सेवासमेत प्रभावित भएको छ । स्थानिय धनबहादुर सिहले भने, ‘छिटो भवन निर्माणका लागी धेरै ठाँउठाउँमा हारगुहार नै ग¥यौं, तर कतैबाट आजसम्म सुनुवाई कतै भएन । भवन नबन्दा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ ।’
भवन बनेपछि स्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारी हुने ठानेका जाजरकोट दशेराका मानबहादुर थापा निराश छन् । दशक अघि निर्माण थालिएको स्वास्थ्यचौकी दशेराको बर्थिङ्ग सेन्टर अहिलेसम्म नबनेर अलपत्र परेपछि उनी निराश भएका हुन् । भवन नबन्दा पुरानो जिर्ण घरबाटै जेनतेन सेवा प्रवाह भइरहेको छ । तर प्रसुति कक्ष नहुँदा सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । गणेश निर्माण सेवाले २०६४ सालमा दुई बर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का स्वीकृत गराएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले पेश्की रकम लिएर काम नगरेपछि भवन अलपत्र परको हो । वारम्बारको ताकेतापछि अलपत्र भवनको निर्माण कार्य हालै पुनः शुरु गरिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
काम नगर्नेलाई कारबाही गर
स्वास्थ्यचौकी सीमाको बर्थिङ्ग सेन्टर भवन, स्वास्थ्यचौकी मजकोटको बर्थिङ्ग सेन्टर भवन र इलाका स्वास्थ्य केन्द्र दल्लीको भवन पनि सात बर्षदेखी अलपत्र अवस्थामा छन् । १० करोड बढी लागतमा बन्ने जिल्लाका आधा दर्जन भवन अलपत्र परेका हुन । सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने भन्दै भवन निर्माणको लागी बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाही र उदासिनताले गर्दा निर्माण कार्य लामो समयदेखी अलपत्र परेको भेरीनगरपालिका ३ का केशवजंग शाहले बताए ।
उनले भने,‘लामो समयदेखि ठेकेदारले काम नगरेर भवन अलपत्र छोडेका छन्, हालसम्म कुनै ठेकेदारलाई सरकारले कारवाहीको गरेको देखिदैन । राज्यको बजेटमा खेलाँची गर्नेलाई तत्काल कारबाही होस्, गलत गर्नेलाई छुट दिनुहुन्न ।’ सम्वन्धित निकायले गलत गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न नसकेका कारण कराडौंको वजेट खेर गएको छ । सहज स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षित प्रसुती सेवा दिनका लागि सरकारले ठुलो लगानीमा भवन निर्माणको काम सुरु गरे पनि सरोकारवाला निकायले वास्ता नगर्दा समस्या परेको कुशे ६ का धनबहादुर सिंहको गुनासो छ । उनले भने, ‘निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले आफ्नो लाइसेन्स नै नवीकरण नगर्ने, कामको जिम्मा आफुले नगरेर अर्काे व्यतmी (पेटी ठेकेदार) लाई दिने गरेका कारण भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।’
गतिलो व्यवस्थापन नहुँदा जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा मात्र होइन, जिल्ला अस्पतालमासमेत जटिल अवस्थाका सुत्केरी र विरामीहरुको उपचारमा समस्या छ । उनीहरुलाई जिल्ला वाहिर रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ । आधुनिक र स्तरीय भवन भए सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिने जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा. कृष्ण शाहको भनाई छ । उनले समयमा बर्थिङ्ग सेन्टरका भवन नबन्दा सुरक्षित सुत्सेरी सेवा दिन कठिनाई भइरहेको बताए । आफ्ना मातहतका स्वास्थ्य भवन निर्माण सम्बन्धमा कुनै भुमिका नदिएकोमा स्वास्थ्य कार्यालयसमेत असन्तुष्ट छ । समयमा भवन नबन्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमासमेत समस्या खट्किएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर नेपालीले बताए ।
उनले भने,‘भवन निर्माण अलपत्र परेपछि कठिनाइ भएको छ, निर्माण भइरहेका मध्ये अधिकांश भवन वथिंर्ग सेन्टरका छन् । निर्माण कार्य विचमै छाडेका भवनका काठहरुमा किरा लागेर प्रयोग नहुने अवस्थामा पुगे, विरामीलाई पनि उपचारमा समस्या छ ।’ उनले भवन निर्माणका लागी कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘भवन निर्माणवारे बोल्ने कुनै अधिकार छैन, तर समस्या हामीलाई नै परिरहेको छ’ उनले भने । असुरक्षित रुपमा गर्भवती हुने चलन रहेको जाजरकोटमा स्वास्थ्य सस्थाहरुको व्यवस्थापन राम्रो नभएका कारण पनि सुरक्षित रुपमा सुत्केरी हुन समस्या रहेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले भवनको टेण्डर गर्ने, ठेक्का स्वीकृत गर्ने, निर्माण गराउने, प्राविधिक मुल्याकन गराउने र भुक्तानी दिने लगायतका सवै काम गर्ने गरेको छ । तर कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेकार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने गरेको छ । यस क्षेत्रका धेरै जिल्लाका भवन निर्माणको काम सुर्खेतबाट हुँदै आएकोले पनि कामले गति लिन नसकेको हो ।
सीमा स्वास्थ्यचौकीको बर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माणको जिम्मा लिएको मैनाचुली सुरुची निर्माण सेवाले समयमा काम नगरिदिएपछि भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । ठेकेदारलाई ताकेता भइरहेको र केही दिनमै काम शुरु गर्ने प्रतिवद्धता गरेको भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख थम्मराज श्रेष्ठले बताए । मजकोट स्वास्थ्यचौकीको बर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माणको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनी फ्राइण्डस कन्स्ट्रक्सन प्रालि कोटेश्वरको विषयमा उजुरी परेकाले छानवीन भइरहेको र कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
त्रिवेणी नलगाडको दल्लीस्थित इलाका स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बनाउँदा बनाउँदै पुरा काम नगरेर छोडिदिएपछि निर्माणको जिम्मा लिएको जिएम कन्ट्रक्सन काठमान्डौलाई कालो सुचीमा राखेर कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘धेरै ढिला भइसक्यो यी भवनहरु यसै आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी ताकेता गरेका छौ, अटेर गर्नेलाई कालो सुचीमा राखेर ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जान्छौ’ उनले भने ।
क्रियाशील पत्रकार मञ्च नेपालका लागि
राजेन्द्र कार्की र रेशमबहादुर खड्का